बाल्यकालमा दक्षिणाका लागि रुने कलाकार को–को हुन् ? - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
प्रकाशित: १८ आश्विन २०७६, शनिबार
यसपालीको दशैं पनि आइ नै सक्यो । रेडियो टेलिभिजन र वेबसाईटहरुमा दशैंको धून बज्न थालिसके । फेसबुक, ईमो, भाईबर इमेल लगायतका सञ्जालमा दशैको शुभकामनाहरुको ओइरो लागेको छ ।
तीज लगतै दशैं आउन अब यति दिन भनेर औंला भाँच्न शुरू गरिन्थ्यो । त्यो डेढ दुई महिना वित्न वर्ष विते जस्तो हुन्थ्यो । दशैंकै लागि भनेर घर सरसफाइ गर्ने, चिउरा कुट्ने, अचार राख्ने आदि गरिन्थ्यो । कमेरो माटो, रातो माटो बोकेको खुब याद आउँछ । छोराहरुले दक्षिणा कम पाउँथे भने हामी छोरीहरूलाई बढी हुन्थ्यो । तास अलिअलि खेलिन्थ्यो, त्यो नि जुटपती । डाइस खेल्न निकै रमाइलो लाग्थ्यो । शुरुमा जितेर हौसिदै खेल्दा निकै हारिन्थ्यो । त्यतिबेला रुन मन लाग्थ्यो । अहिले सम्झिदा हाँसो लाग्छ । थारु जातिहरुले कागजको घोडा बनाएर त्यसभित्र मान्छे हुन्थे । अनि दशै बोलाएको भन्दै गाउँ घुम्थे । त्यो क्षण निकै रमाइलो लाग्थ्यो । लिंगे पिङको पनि निकै सम्झना आउँछ । पारिलो घामसँगै धानको बालामा भएको शीतले साँच्चै दशैं बोलाएको आभास हुन्थ्यो । खासमा मलाई दशैंको वातावरण नै रमाइलो लाग्छ । साथीहरूका अगाडि उनीहरुको भन्दा आफ्नो घर राम्रो देखियोस् भन्ने लाग्थ्यो । दक्षिणामा पाउको चारआना आठआना पनि निकै महत्वपूर्ण लाग्थ्यो, तर प्राय मेरो दक्षिणा हराउने गथ्र्यो ।